काठमाडौं । नेपालमा थप दुई हजार ८२४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या एक लाख ७३ हजार ५६७ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा.जागेश्वर गौतमले उक्त जानकारी दिएका हुन् । प्रवक्ता
काठमाडौं। नेपालमा थप तीन हजार ५१७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाख ६८ हजार २३५ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अपडेट गरेको कोभिड–१९ सम्बन्धी विवरणमा १४ हजार ९०९ नमूना परीक्षण गर्दा उनीहरुमा संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ । हाल ३८ ह्जार ३५७ जनामा
काठमाडौं । नेपालमा थप एक हजार ९५४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै संक्रमितको संख्या एक लाख ६२ हजार ३५४ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्राडा.जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार आठ हजार २४८ जनाको नमूना परीक्षण गर्दा उनीहरुमा संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं । नेपालमा थप पाँच हजार ७४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कुल सङ्क्रमितको संख्या एक लाख ४४ हजार ८७२ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार चौबीस घण्टामा सो २० हजार ११८ जनाको नमून परीक्षण गर्दा
तीन हजार ९३ जना संक्रमित,कुल संक्रमितको संख्या १ लाख ३९ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । नेपालमा थप तीन हजार ९३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कुल सङ्क्रमितको संख्या एक लाख ३९ हजार १२९ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो नियमित प्रेस ब्रिफ्रिङमा प्रवक्ता प्राडा.जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार १३ हजार ५५९ जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दा उनीहरुमा
काठमाडौं । नेपालमा थप तीन हजार ७९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कुल संक्रमितको संख्या एक लाख ३६ हजार ३६ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अुनसार १५ हजार ७४३ नमूनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा
काठमाडौं । नेपालमा थप दुई हजार ९४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै संक्रमितको संख्या एक लाख ३२ हजार २४६ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफ्रिङमा प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार १४ हजार ८७५ ओटा नमूना परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमण देखिएको
काठमाडौँ । नेपालमा थप ४ हजार ३९२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कुल संक्रमितको संख्या एक लाख २६ हजार १३७ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार ३ हजार ५
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । नयाँ मन्त्री मण्डलमा नेकपाका सचिव विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको मन्त्रालय खोसेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा सिमित गराइएको छ । रक्षा मन्त्रालयको
काठमाडौँ, २८ असोज । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदको सदस्यमा पुनः निर्वाचित भएको छ । मंगलबार राति राष्ट्र संघ मुख्यालयमा भएको मतदानमा नेपाल निर्वाचित भएको हो । १९३ देश सम्मिलित राष्ट्र संघको महासभाले नेपाललाई मानव अधिकार परिषद्मा तीन वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित गरेको हो । अब
२६ सय जनामा कारोना संक्रमण,१२ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । नेपालमा थप २ हजार ६३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै संक्रमितको संख्या १ लाख १७ हजार ९९६ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफ्रिङमा प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार २४ घण्टामा १३ हजार ९४७ पीसीआर परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण
कोरोना संक्रमणबाट १८ जनाको मृत्यु,थप ३५ सय ५६ जनामा संक्रमण
काठमाडौं । नेपालमा थप तीन हजार ५५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै संक्रमितको संख्या एक लाख १५ हजार ३५८ जना पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा पछिल्लो २४ घण्टामा १५ हजार ५७७ जनाको नमूना परीक्षण गर्दा उनीहरुमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । हाल ३५ हजार देशभर ९१५ जनामा
१४ हजार ५३० जना परीक्षण गर्दा चार हजार ४७ संक्रमित
काठमाडौं। नेपालमा थप चार हजार ४७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमितहरूको संख्या एक लाख ११ हजार दुई जना पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार १४ हजार ५३० जनाको नमूना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा
दुई हजार ७१ जनामा कोरोना संक्रमण,संक्रमितको संख्या एक लाख सात हजार नाघ्यो
काठमाडौं । नेपालमा थप दुई हजार ७१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कुल संक्रमितको संख्या एक लाख सातहजार ७५५ जना पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा १२ हजार ४२७ जनाको पीसीआर परीक्षण
काठमाडौं। नेपालमा थप पाँच हजार आठ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कुल सङ्क्रमित एक लाख पाँच हजार ६८४ पुगेको छ । एकै दिन यतिका संक्रमित देखिएको यो पहिलो हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो चौबीस घण्टामा १९ हजार
कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाख नाघ्यो,आज दुई हजार ५९ जनामा कोरोना
काठमाडौं । नेपालमा थप दुई हजार ५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोसँगै सङ्क्रमितको संख्या एक लाख ६७६ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार १३ हजार २७९ ओटा नमूनाको परीक्षण गरिएकोमा सो संख्यामा सङ्क्रमित
अहिलेसम्मकै उच्चःचार हजार ३६४ जनामा कोरोना संक्रमण,उपत्यकामा २५ सय ४०
काठमाडौँ । नेपालमा थप चार हजार ३६४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमित हुनेको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो । योसँगै सङ्क्रमितको संख्या ९८ हजार ६१७ पुगेको छ । स् वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमका अनुसार बिहीबार अठार हजार ४७३ ओटा नमूनाको परीक्षण
काठमाडौं उपत्यकामा एक हजार १७ सहित १५ सय १५ जना कोरोना संक्रमित थपिए
काठमाडौं । नेपालमा थप एक हजार ५५१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कारोना संक्रमितको संख्या ९० हजार ८१४ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफ्रिङमा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी पछिल्लो २४ घण्टामा ११ हजार ४७ जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएको थियो । मन्त्रालयले
दुई हजार ४४० जना संक्रमित थपिए
काठमाडौं । देशभर थप दुई हजार ४४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो चौबीस घण्टामा १३ हजार ७८१ जनाको नमूना परीक्षण गर्दा ती व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै सङ्क्रमितको संख्या कुल ८९ हजार २६३ पुगेको छ । हाल
कोरोना ‘हट स्पट’ बन्दै संघीय राजधानी काठमाडौं पाँच दिनमा ५ हजार १६७ नयाँ संक्रमित थपिए
काठमाडौं । पछिल्ला केहीदिन यता संघीय राजधानी काठमाडौं कोरोना संक्रमणको ‘हट स्पट’ बन्दै गएको छ । पछिल्लो पाँच दिनमा मात्र उपत्यकामा ६ हजार २५८ जना संक्रमित थपिएका छन् । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं,भक्तपुर र ललितपुर मध्ये सबैभन्दा बढी जोखिममा काठमाडौं छ । सो अवधिमा काठमाडौंमा मात्र ५ हजार १६७ जना
थप २२ सय ५३ जनामा कारोना संक्रमण,संक्रमितको संख्या ८६ हजार नाघ्यो
काठमाडौं। नेपालमा थप दुई हजार २५३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर ११ हजार ७८४ जनाको नमूना परीक्षण गर्दा यतिको संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन् । योसँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमित ८६ हजार ५८२३ पुगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले दिएको
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक र प्रेस सल्लाहकारलाई कोराना पुष्टि
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका छन् / ‘हिजोको पीसीआर परीक्षणबाट ममा पनि कोरोना पोजिटिभ देखियो । यसबीच मसंग सम्पर्कमा आउनु भएका सबै माहानुभवले
सत्याग्रहीको जीवनरक्षा गर्न सरकारसँग पूर्व राष्ट्रपतिको माग
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग भेट गरेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति यादवले एउटा सत्याग्रहीको अनशनको २४ दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले वार्ता र जीवनरक्षाको कुनै पहल नगरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । डा.यादवले वर्तमान परिस्थिति
एक हजार ९११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,संक्रमितको संख्या ८० हजार नजिक
काठमाडौं । नेपालमा थप एक हजार ९११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमित ७९ हजार ७२८ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा १२ हजार ४४४ जनाको नमूना जाँच गर्दा यतिको संख्यामा संक्रमित देखिएका हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर
१५ सय ५९ जनामा कोरोना संक्रमण,संक्रमितको संख्या ७८ हजार नजिक
काठमाडौं । नेपालमा थप एक हजार ५५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या ७७ हजार ८१७ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १२ हजार २०५ ओटा नमूना परीक्षण
थप १५ सय १३ जनामा कोरोना संक्रमण,संक्रमितको संख्या ७६ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । नेपालमा थप एक हजार ५१३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा जागेश्वर गौतमका अनुसार दश हजार ८९१ जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा ती संक्रमित भेटिएका हुन् । योसँगै सङ्क्रमितको संख्या ७६ हजार २५८ पुगेको छ । प्रवक्ता गौतमका अनुसार हाल
उपत्यकामा ८१७ सहित देशभर १३ सय ५१ कोरोना संक्रमित थपिए
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप १३ सय ५१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या संख्या ७४ हजार ७४५ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार चौबीस घण्टामा १० हजार ८० ओटा नमूना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण
कारोनाबाट थप दश जनाको मृत्यु,काठमाडौं उपत्यकाका ५
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप दश जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै कोरानाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४७७ पुगेको छ । स्वासथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा काठमाडौं उपत्यकामा ५ जना छन् । काठमाडौंमा एक महिलासहित ३ जना र ललितपुरमा २ पुरुष गरी जम्मा ५ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य
१२ सय सात जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । नेपालमा थप एक हजार २०७ जनामा कोराना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार दश हजार १९ जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । योसहित सङक्रमितको संख्या ७१ हजार ८२१ पुगेको छ । मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता
१३ सय १३ जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । नेपालमा थप एक हजार ३१३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै सङ्क्रमितको संख्या ७० हजार ६१४ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो चौबीस घण्टामा घण्टामा १२ हजार २६२ ओटा नमूना परीक्षण गरिएको थियो